Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta shaqo abuur u samaysay 55 qoys oo danyara qoysaskaaso kaso kala jeeda gobolada dalka oo dhan. Iyada o dhanka kale xadhiga laga jaray dhismayaal cusub o wasaarada laguso kordhiyay. – MESAF
News & Events News Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta shaqo abuur u samaysay 55 qoys oo danyara qoysaskaaso kaso kala jeeda gobolada dalka oo dhan. Iyada o dhanka kale xadhiga laga jaray dhismayaal cusub o wasaarada laguso kordhiyay.
Madaxwayne ku xigeenka qaran mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici.
Wasiirka wasaarada maalgashiga mr cawed.
Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska iyo Agaasimaha guud ee wasaaradda.
Ayaa maanta si wada jira u gudoonsiiyay qoysaskaa danyarta ah lacag loogu tala galay iyo alaab ay codsadeen in loo iibiyo.
ugu horaynba waxaa madashaa iba furay agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan agaasimaha ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay maraaxilkii barnaamijkani soo maray iyo wakhti xaadirkan oo uu noqday mashruuc shaqo abuur oo guulaystay.
Dhanka kale waxaa isna hadalo dardaarana iyo iftiimin isugu jira madashaas ka jeediyay wasiirka maalgashiga wasiirka ayaa balan qaaday in ka wasaarad ahaan uu balan qaadaayo in ay cashuurta ka daayaan danyarta shaqo abuurka loo sameeyey.
geesta kale waxaa kelmado kooban madasha ka jeedisay wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland Marwo Hinda jaamac xirsi Gaani wasiirka ayaa dhankeeda ka warbixisay qoysaskan iyo habkay wasaaraddu kuso kala xulatay
Wasiirka ayaa madasha uga mahadnaqday duqa dawlada hoose ee caasimada mudane cabdiraxmaan soltelco.
ugu danbayna waxaa madashaas soo afmeeray madaxwayne ku xigeenka qaranka mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici.
madaxwaynaha ayaa guud ahaamba wasaaradda ku amaanay waxqabadada balaadhan iyo guulaha taariikhiga ah ee ay wasaaraddu qaranka uso hoysay.
Xafiiska isgaadhsiinta Tiknoolajiyadda iyo kaydka xogta